ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၆)
အနည်း အင်ကယ်ပေါတယ် အူရှာတယ် ဟမ်မိတစ် ကုန်းတတ်ကုန်းဆင်း အနည်း နာလတကယ်
ကြည့်ပါအုံးဗျာ သူများဘာသာကို ရစရာမရှိအောင် အတက်စီးစကားလုံးများနဲ့ ပြောတတ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂေါတာမမှာ မယားငါးယောက် စာရင်းကို တော့ မဖော်ပြကြဘူး ဂတုံးတွေ က သိတဲ့အတိုင်းပဲ သူတို့ ထမင်းအိုးကို ထုံးသုတ်ပြီး ကာကွယ်နေတာ ကျွန်တော်အခုလို လုပ်နေတာကို ဂတုံးတွေ ကျေနပ်မည်မဟုတ်ပါ။
သူများဘာသာကို မဟုတ်မမှန်စကားတွေ နဲ့ စွပ်စွဲရရင် ပျော်ရွှင်လို့ မဆုံး သဘောကိုကျလို့ ဂတုံးများ ကျွန်တော်ယခုလို့ လုပ်နေတာကို ထမင်းငတ်မီ အရေးအား တွေးကြောက်၍ တိုက်ခိုက်လာမည်မှာ အမှန်ပါ . ရပါတယ် တိုက်ပါ... အမှန်တိုင်း ဖြစ်အောင်တော့ ပြောပါ. ..မဟုတ်မမှန်တဲ့ စကားတွေ နဲ့ မပြောပါနဲ့ ...သမိုင်းနဲ့ အကိုအကားလေးနဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပါ.... အပေါ်က ပုံကတော့ ဂေါတမကုလားက ပေးပို့လာတဲ့ ပုံပါ။ ဒါကို စာရေးသူက ဒီလိုဖြေစွက်လိုက်ပါတယ်.... ဂေါတာမရဲ့ မယားနာမည်တွေ ကို ဖော်ပြထားလို့ မပြ့ည်စုံမှာစိုးလို့ သူ၏သားနာမည်တွေ မှာ ဖြည့်စွက်ရေးသားလိုက်ပါတယ်.... သားတွေ မွေးဖွားမူကလည်း ထူးဆန်းလေစွ မယားငါးယောက် သားငါးယောက်တဲ့ ဒါတော့ မဖြစ်နိူင်ပါ..... ဒီထက်မက သားသမီးရှိရအုံးမယ်.... သူတို့ မဖော်ပြထားတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိတော့ သူတို့ရေးသားဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စာရေးသူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.... မယုံလျှင် ဟံသာဝတီတိုက်ထုတ်၊ ဗုဒ္ဓဝင်ဝတ္ထု၊ စာမျက်နှာ ၁၅၅ မှာ ရှာဖွေလို့ရပါတယ်.... အောက်ကတော့ သူမယားနာမည်နဲ့ သူသားငါးယောက်ရဲ့ နာမည်တွေ ပါ.
၁။ ယသောဓရာ နှင့် သားတော် ရာဟုလာ။
၂။ သုမိတ္တာ နှင့် သားတော် ပုတ္တ။
၃။ ကဉ္စန နှင့်သားတော် ဥပရောဂ။
၄။ မင်္ဂလ နှင့် သားတော် သင်္ဃာဝရ။
၅။ မလ္လိကာ နှင့် သားတော် ဇာတိဝရ။
၄င်းတို့ကို ဗုဒ္ဓဝင် အကျဉ်းချုပ်နှင့်ဒီဃနိကာယ် ကျမ်းတွင် ပါကြောင်း လမ်းညွန်ပြထားလေသည်။
Labels: ကိလေသာကြွယ်ဝသော ဂေါတာမ, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ